Ny Oktoberfest dia ho tsara fihavanana tontolo iainana | Safidy Alemana
ny Nina von Kalckreuth 8. Oktobra 2019, 9: 25
Labiera labiera, hena masira ary mpitsidika an'arivony talohan'ny volana Oktobrafest tsy voatery ho fiarovana ny tontolo iainana. Na izany aza, satria nitombo ny fahafantarana sy ny fijerena ny tontolo iainana, ny foto-kevitry ny festival dia efa navaozina ihany koa ankehitriny:
CO2 tsy miandany tranovorona: Tamin'ity taona ity, sambany, ny labiera tsy miandany amin'ny toetrandro dia novokarina tao amin'ny Hofbräu Festzelt (HB) sy ireo orinasa rehetra manompo ity labiera ity. Araka ny filazan'i Brauereichef Michael Möller hatramin'ny 2010 ny kirihitra CO2 dia nopiansy siantifika, niezaka ny hampihenana azy io teo amin'ny sehatry ny bodofotsy.
Fandrarana ny Fanary tableware: Satria ny 1991 ihany no azo ampiasaina ny kitay azo ampiasaina.
Mandrara zava-pisotro am-bavony: Ny tavoahangy voaverina ihany no havoaka arakaraka ny fidinany kely.
henjana Mandany fisarahana: Amin'ny lanjan'ny tompon-trano fandraisam-bahiny, ny toeram-pambolena tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny fako ny tenany. Ireto ny sakafo, ary koa ny baoritra sy ny fitaovana hafa misaraka sy manindry.
Vokatry ny maitso hery ary Ökogas: Ao amin'ny tranobe sasany, toa ny Schottenhammel, dia mafana ny rano amin'ny sela solar na ny jiro LED ampiasaina hanazavana ny tranolay.
isam-paritra entanaMihamaro hatrany ny orinasa mitady làlana fitaterana fohy sy vokatra organika avy amin'ny hena mankany amana akondro sy sôkôla akondro. Ny menu sasany aza dia manana lovia vegan.
Famerenan'ny rano: Ny rano nampiasaina hanasana ny fitoeran-drano dia namboarina tamina diabeta fito ho an'ny trano fidiovana.
Ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny Oktobrafest, hoy ny vavahadin-tanànan'i Munich "nandritra ny taona maro dia lasa resaka". Ny vahaolana amin'ny ady ara-tontolo iainan'ny mpizahatany maro izay mbola ho avy amin'ny fiaramanidina lavitra, toa an'i Aostralia na Amerika, dia horesahina ao amin'ny ho avy any Berlin. Ary na eo aza ny fiezahana hahatonga ny Oktoberfest ho namana tsara kokoa amin'ny tontolo iainana, mazava ho azy fa momba ny zava-misy ihany koa ny ny mpitsidika afaka mankafy ny andro amin'ny Oktoberfest - ary na dia eo amin'ny labiera tsy misitraka CO2 aza.
Previous article Wiesn
Lahatsoratra manaraka Dropout any Alemana: fiainana tsy misy jiro sy rano | Horonantsary fanadihadiana WDR
Zoma ho an'ny Hoavy - Manosika demotivation